တယ်လီ 0086 136 8301 5302
Non-linear လမ်းဆုံ detector
တာဝေးအကွာအဝေး acoustic device ကို
TS3 ကြိုးမဲ့ Remote-Controlled Life Buoy
Model： BJQ63 / 0.6 လျှောက်လွှာ: BJQ63 / 0.6 Hydraulic Power Unit သည်ယာဉ်မတော်တဆမှုများ၊ ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်မတော်တဆမှုကယ်ဆယ်ရေးနယ်ပယ်များတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာဟိုက်ဒရောလစ်အတင်းအဓမ္မ entry ကို tool ကို၏ပါဝါအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက Feature - ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်းမြင့်မားသောအဆင့်နှင့်နိမ့်နိမ့်နိမ့်အဆင့်အဆင့်ဖိအား၊ အလိုအလျှောက်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးအချိန်ကိုအရှိန်မြှင့ ်၍ အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လေကြောင်းဟိုက်ဒရောလစ်ဆီကိုအသုံးပြုပြီးအပူချိန် -30 30 55 မှ℃အောက်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ကိရိယာနှစ်စုံကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
Model： GYJK-36.8 ～ 42.7 / 20-3 လျှောက်လွှာ GYJK-36.8 ～ 42.7 / 20-3 Hydraulic Combi-Tool Cutter-Spreader ကိုယာဉ်မတော်တဆမှုကယ်ဆယ်ရေး၊ ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေး၊ မတော်တဆမှုကယ်ဆယ်ရေးစတဲ့နေရာတွေမှာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုပါတယ်။ ၎င်းသည်မိုဘိုင်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်သင့်လျော်သည်။ သတ္တုကိုယ်ထည်၊ မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ပိုက်နှင့်သတ္တုပြားများကိုဖြတ်ပါ။ ဝိသေသလက္ခဏာများ GYJK-36.8 ～ ၄၂.၇ / ၂၀-၃ ဟိုက်ဒရောလစ် Combi-Tool Cutter-Spreader သည်ညှပ်ခြင်း၊ ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ဤကဲ့သို့သောကိရိယာသည်ညှပ်နှင့်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ညီမျှသည်။
ဟိုက်ဒရောလစ် Ram / ဟိုက်ဒရောလစ်ထောက်ခံမှုလှံတံ
Model： GYCD-130/750 လျှောက်လွှာ: GYCD-130/750 Hydraulic support Rod သည်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့်ရထားလမ်းမတော်တဆမှု၊ လေဘေးနှင့်ကမ်းခြေကယ်ဆယ်ရေး၊ အဆောက်အ ဦး များနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ အဓိကအသွင်အပြင်များ - ရေနံဆလင်ဒါသည်မြင့်မားသောအားကောင်းသောပေါ့ပါးသောအလွိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အရန်ပစ္စည်းကိရိယာ - mandril carriage ခြေထောက်များအတွက်နည်းနည်းကြာပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုမြန်စေသည်။ ဆစ်ဆစ်သွားတိုက်တံစွန်းများကိုကောင်းစွာစီစဉ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်ဖိစီးမှုအောက်တွင်ကျဆင်းမည်မဟုတ်ပါ။ Two-way ဟိုက်ဒရောလစ်သော့ခတ်ပေါင်းစပ် ...
Model: GYJQ-25/125 ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: TOPSKY လျှောက်လွှာ - GYJQ-25/125 သည်အဝေးပြေးလမ်းနှင့်ရထားလမ်းယာဉ်တိုက်မှု၊ ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်၊ အဆောက်အအုံပြိုကျခြင်း၊ လေထုဘေးအန္တရာယ်၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းအကွာအဝေး - မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ သတ္တုကိုယ်ထည်၊ ပိုက်လိုင်း၊ profil bar၊ သံမဏိပြားများစသဖြင့်။ ဝိသေသလက္ခဏာများ - Blade သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအပူကုသမှုကိရိယာသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ anodizing နဲ့ကုသမျက်နှာပြင်။ ဒါကြောင့်သူကဝတ်ဆင်ကောင်းရှိပါတယ်။ ရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများကိုအကာအကွယ်ထည်တပ်ဆင်ထားသည်။ ...
မော်ဒယ်လ် Y GYKZ-38.7 ～ 59.7 ／ 600 လျှောက်လွှာ: GYKZ-38.7 ～ 59.7 ／ 600 Hydraulic Spreader သည်ယာဉ်မတော်တဆမှုကယ်ဆယ်ရေး၊ ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေး၊ မတော်တဆမှုကယ်ဆယ်ရေးနှင့်အစတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းသည်အတားအဆီးများကိုရွေ့လျားခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်း၊ အက်ကြောင်းများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်တံခါးပိတ်ပိတ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်သတ္တုကိုယ်ထည်ကိုပုံပျက်။ ကားမျက်နှာပြင်၏သံမဏိပြားများကိုကွဲစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဇစ်နှင့် တွဲဖက်၍ လမ်းပေါ်ရှိအတားအဆီးများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ သွင်ပြင်လက္ခဏာ - တိုးချဲ့ခြင်းအကွာအဝေး - ၆၀၀ မီလီမီတာ Ope လုပ်နေစဉ်ခဏကြာသည်။
လက်စွဲစာအုပ်စုပ်စက်မော်ဒယ် BS-63 / 0.07
တစ်ခုတည်းသော interface ကိုဟိုက်ဒရောလစ် tool ကိုများအတွက်အထောက်အကူပြုပါဝါအရင်းအမြစ် Feature ။ လောင်စာဆီသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်မီးမလိုအပ်ပါ။ လက်ဖြင့်လည်ပတ်ခြင်းသည်ဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးပြည့်စုံသောအတွင်းပိုင်းသည်ကယ်ဆယ်ရေးစွမ်းရည်တိုးတက်စေရန်မြင့်မားသောဖိအားအနိမ့်အမြင့်မှလွတ်လပ်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ၁။ တစ်ခုတည်းသော interface ဒီဇိုင်းသည်ဖိအားအောက်တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၂၊ ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သောလျှပ်တစ်ပြက်မျက်နှာပြင်၊ ပိုမိုအဆင်ပြေ။ ပိုမိုလုံခြုံသောလည်ပတ်မှု။ Parameters Rated အလုပ်လုပ်တဲ့ဖိအား - 63MPa ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီတိုင်ကီစွမ်းရည်: ≧ 2.0L Low Voltag ...
အကြီးစားဟိုက်ဒရောလစ်ထောက်ခံမှုသိုးထီးမော်ဒယ် GYCD-120 / 450-750
Feature ထိုသိုးသည်ကယ်ဆယ်ရေးနေရာရှိအထောက်အပံ့၊ traction နှင့်အခြားလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ထုတ်ကုန်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီးထောက်ခံမှုအကွာအဝေးနှင့်လေဖြတ်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်ထားသည်။ တိုးချဲ့ကယ်ဆယ်ရေးနေရာ။ ၁။ ဖိအားအောက်တွင်လည်ပတ်နိုင်သည့်နှစ်ဆပြွန်တစ်ခုတည်းသောမျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်း။ ၂. Interface သည် ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်သောလည်ပတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုအဆင်ပြေပြီးလည်ပတ်မှုအတွက် ပို၍ လုံခြုံသည်။ ပိုမိုတိကျသောလည်ပတ်မှုအတွက် (၃) non-slip switch control ။ ၄ ။
အင်္ဂါရပ် Cutter ကိုကယ်ဆယ်ရေးနေရာတွင်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ခွဲထုတ်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အစွန်းပစ္စည်းအစွန်းတောက်ပတိုးမြှင့်ဖို့ကို update လုပ်ခဲ့သည်။ ဓားအစွန်းခိုင်မာခြင်း၊ ၁။ ဖိအားအောက်တွင်လည်ပတ်နိုင်သည့်နှစ်ဆပြွန်တစ်ခုတည်းသောမျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်း။ ၂. Interface သည် ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်သောလည်ပတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုအဆင်ပြေပြီးလည်ပတ်မှုအတွက် ပို၍ လုံခြုံသည်။ ၃။ ပိုမိုတိကျသောလည်ပတ်မှုအတွက် non-slip switch ထိန်းချုပ်မှု ၄ ။
အကြီးစားဟိုက်ဒရောလစ်ရှုး & ဖြန့်စက်မော်ဒယ်: GYJK-25-40 / 28-10
Feature ပေါင်းစပ်ခြင်းကိရိယာကိုချဲ့ထွင်ခြင်း၊ ညှပ်ခြင်း၊ ညှပ်ခြင်းနှင့်အခြားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဓားအစွန်းပစ္စည်းကိုအရူးအမူးဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့်ဓါးအစွန်းတောက်ပမှုကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်။ ဓားအစွန်းခိုင်မာခြင်း၊ ၁။ ဖိအားအောက်တွင်လည်ပတ်နိုင်သည့်နှစ်ဆပြွန်တစ်ခုတည်းသောမျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်း။ ၂. Interface သည် ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်သောလည်ပတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုအဆင်ပြေပြီးလည်ပတ်မှုအတွက် ပို၍ လုံခြုံသည်။ ၃ ။
အကြီးစားဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာ pump BJQ-63 / 0.4S
Feature ဖြန့်ချိသူကိုကယ်ဆယ်ရေးနေရာတွင်ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ ထို့အပြင်ထုတ်ကုန်၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့်ချဲ့ထွင်ရန်အဖွင့်အကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်စေရန်အတွက်မေးရိုးပစ္စည်းများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်။ ၁။ ဖိအားအောက်တွင်လည်ပတ်နိုင်သည့်နှစ်ဆပြွန်တစ်ခုတည်းသောမျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်း။ ၂. Interface သည် ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်သောလည်ပတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုအဆင်ပြေပြီးလည်ပတ်မှုအတွက် ပို၍ လုံခြုံသည်။ ၃ ။
တင်သွင်းထားသောဟွန်ဒါဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ပါဝါသည်စွမ်းအားမြင့်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်သည်။ ၁။ ထုတ်ကုန်နှစ်ခုဖွဲ့စည်းမှုသည်စက်နှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ 2, တစ်ခုတည်း interface ကိုဒီဇိုင်း, တ ဦး တည်းခြေလှမ်းအတွက်, ဖိအားအောက်မှာ operated နိုင်ပါသည်။ ၃၊ ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သောလျှပ်တပြက်မျက်နှာပြင်၊ ပိုမိုအဆင်ပြေ။ ပိုမိုလုံခြုံသောလည်ပတ်မှု။ (၄) ကောင်းမွန်သောအပူဓာတ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းသည်အလုပ်ချိန်ကိုအကန့်အသတ်မရှိဖြစ်စေသည်။ ၅။ ဆူညံသံနိမ့်ကျမှုသည်ကယ်ဆယ်သူများနှင့်ပိတ်မိနေသောလူများကြားခေါ်ဆိုမှုအရည်အသွေးကိုကူညီသည်။ ၆။ အလေးချိန်ပေါ့ပြီးသေးငယ်တဲ့အရွယ် ...
လျင်မြန်စွာ plug ကို extension ကိုလှံတံ
1, စံအရွယ်အစား 125/150 / 200mm သုံးဖြစ်ပါတယ်။
လျင်မြန်စွာထည့်သွင်းအမျိုးအစားထိကပေါက်ဒီဇိုင်း။ extension လှံတံနှင့်ပစ္စတင်ကြိမ်လုံး plug ကိုဖြုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုဖြုတ်ဖို့ "1 စက္ကန့်" ။
3, Skid-knurling ဒီဇိုင်း၊ ထိတွေ့မှုနှင့်ပွတ်တိုက်အားကိုခိုင်မာစေခြင်း၊
[ထုတ်ကုန်အသစ်] ကြိုးမဲ့ဥာဏ်ရည် ...
compressed air foam မီးသတ်ဆေးဘူး ...
တိကျမှန်ကန်သော eq ၏အသေးစိတ်ရှင်းပြချက် ...
10B NO.17 HuanKe အလယ်လမ်း Jin Qiao စက်မှုအခြေစိုက်စခန်း Tongzhou ခရိုင်ပေကျင်းတရုတ် 101102
ယခုကျွန်ုပ်တို့အားဖုန်းခေါ်ပါ - 0086 136 8301 5302